पीसीआर परीक्षण शुल्कमा समायोजन : सरकारी प्रयोगशालामा ८ सय र निजीमा १५ सय रुपैयाँ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पीसीआर परीक्षण शुल्कमा समायोजन : सरकारी प्रयोगशालामा ८ सय र निजीमा १५ सय रुपैयाँ
काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको शुल्क समायोजन गरेको छ । बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजन गरिएको बताए ।
अब सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा ८ सय रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा १ हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो ।
त्यस्तै अब निजी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि निजी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार रुपैयाँ लिने गरिन्थ्यो ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १६:३९
काठमाडौँ — मौसम परिवर्तनको समय सुरु भएसँगै धेरै मानिसहरूमा मौसमी रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ । यससँगै कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि द्रूत गतिमा बढिरहेको छ ।
आम मानिसले आफूलाई भएको संक्रमण मौसमी रुघाखोकी हो कि कोभिड संक्रमण छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । यसले अस्पतालमा दैनिक रुपमा रुघाखोकीका बिरामीको चाप बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण सामान्य रुघा लाग्दा पनि अस्पताल जानेको संख्या बढेको छ । यसै विषयमा चिकित्सक डा रक्षा गौतमसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश पूरा पढ्न : लापर्बाही नगरौँ, ओमिक्रोनले ज्यान लिन सक्छ : डा. रक्षा गौतम
प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १६:३७